5 Su'aalood oo lala yeesho Maamulaha Gobolka Salish ee CHPW - Bogga internetka ee CHPW's blog ee rasmiga ah ee CHPW's blog ee rasmiga ah | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
News | Noofambar 2, 2021
La dhejiyay Noofambar 2-deeda, 2021 - Waqtiga Akhriska: 3 Daqiiqad / s
La kulan Kate!
Waa maxay sababta 5 su'aalood?
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), waxaanu aaminsanahay awoodda bulshada. Waxaan iskaashi la samaynaa xubnahayaga, bixiyayaasha, iyo bulshooyinka si aan u bixino daryeel tayo leh oo ka caawiya qof kasta iyo qoys kasta inay daboolaan baahidooda caafimaad.
Kate Ingman (iyada/iyada) waxay dhawaan nagu soo biirtay shaqadan, doorka Maareeyaha Gobolka ee Daryeelka la Maareeyay Kate waxa aanu waydiinay dhawr su'aalood si ay bulshadeenu u barato iyada iyo shaqadeeda.
Waxaan la joogay CHPW in ka badan hal bil. Anigu waxaan ahay Maamulaha Gobolka ee Daryeelka Isku-dhafka ah ee la maamulay ee gobolka Saalix.
Waxaan u shaqeeyaa inaan matalo bulshada aan ku noolahay iyo gobolka Salish, oo ay ku jiraan Kitsap, Clallam, iyo Jefferson County (iyo Buuraha Olombikada).
Waxaan ka shaqeeyaa heerka bulshada ee gobolka oo dhan waxaana la shaqeeyaa CHPW iyo bixiyeyaasha gobolka. Iyada oo ay la socdaan maamulayaasha kale ee gobolka ee Gobolka Washington, kooxdayada Daryeelka la Maareeyey ee Isku-dhafan (IMC) waxay ka shaqeeyaan inay ka warqabaan baahiyaha gaarka ah ee gobol kasta oo ay u doodaan.
💡 Ma ogeyd? Daryeelka isku dhafan ee CHPW wuxuu bixiyaa adeegyada caafimaadka jirka iyo dhaqanka labadaba, oo ay ku jiraan caafimaadka dhimirka iyo daaweynta cilladda isticmaalka muqaadaraadka. Sidan xubnuhu waxay ku heli karaan daryeelka ay u baahan yihiin hal qorshe.
Maxaa kugu dhiirigeliyay inaad ka codsato doorka CHPW?
Doorkani wuxuu siinayaa fursad aan ku sii wado u adeegida bulshadayda oo aan ballaariyo saamayntayda wixii ka baxsan caafimaadka dabeecadda, taas oo ahayd diiraddayda doorarkii hore, si aan ugu daro caafimaadka jidhka, guriyeynta, iyo dhammaan baahiyaha gaarka ah ee taageera shakhsiga bulshadooda. Waxaa igu dhiiri galiyay Ballanqaadka CHPW si loogu doodo isbeddelka siyaasadda oo diiradda la saaro dadaalka beesha Washington.
Waxaan shaqadeyda ka bilaabay shaqada bulshada sababtoo ah waxaan arkay baahida carruurta oo ka baxsan fasalka oo la galay gurigooda. Waxaan rabay inaan saameyn ku yeesho wanaagga carruurta oo keliya, laakiin qoyskooda iyo nidaamka bulshada, sidoo kale, si aan u taageero caafimaadkooda guud. Socdaalkani wuxuu ugu dambeyntii horseeday xirfad ku wajahan caafimaadka dadweynaha iyo daryeelka caafimaadka.
"Helitaanka daryeelka caafimaadka ee ku habboon kana warqaba baahiyahaaga gaarka ah waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa taageerada iyo horumarka qoys iyo bulsho caafimaad qaba oo guulaysta. Waxaan dareemayaa nasiib wanaag inaan ku isticmaalo xirfadahayga si aan ugu taageero wacnaanta bulshada shaqadayda CHPW.
– Kate Ingman, Maamulaha Gobolka ee Daryeelka Isku-dhafka ah ee la Maareeyay ee Gobolka Salish ee Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington
Waxaan dhawaan dib u hagaajiyay sagxadaha alwaaxyada 100 jirka ah ee gurigayga! Mashruucani wuxuu qaatay 8 bilood wuxuuna ku bilaabmay si aan waxba galabsan isagoo "kor u qaadaya geesta roogga." Kuma talinayo. 😊
Waxaan sidoo kale bilaabay akhrinta buugaagta mar kale. In aan do ku talin!
Haddii aad leedahay booqdayaal ka yimid magaalada dibaddeeda, xaggee jeceshahay inaad u kaxayso si ay ula kulmaan Pacific Northwest?
Meelo badan oo laga dooran karo! Haddii aan maalin kaliya haysano: waxaan ku bilownaa croissants ee rootiga Saboteur, ku soco xeebta Sea Glass ee Port Townsend, qado ku soo dhawow biyaha, ka dibna Finn River Cider guriga.
Daryeelka Dhameystiran ee CHPW
Daryeelka Caafimaadka Maskaxda wuxuu ka bilaabmaa dhegeysi
« Caafimaadka Cimilada Qabow iyo Badbaadada
Tallaalka COVID ee Carruurta: 3 shay oo muhiim ah in la ogaado »